tia manao ski ambony lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
tia manao ski ambony lalao
na oviana na oviana dia tsy nijanona teo an ski? Manomboka fiofanana no fotoana, nandefa maimaim-poana amin'ny aterineto lalao tia manao ski ambony. Ity fizarana ity no tena mahafinaritra ny milalao, satria misy foana ny ririnina, fa ho an'ny ankizy io no fotoana mahafinaritra indrindra ao anatin'ny taona. Hanana fahafahana maro hanalonalona ny tendrombohitra, mandray anjara amin'ny fifaninanana, na manao asa iray napetraka teo amin'ny mpilalao fototra. Teny an-dalana any no manaraka ny ratsy snowmen sy ny ankizy miezaka mandondòna anao eny amin'ny lalana amin'ny snowballs. Mihazona ny mizana, dia maika lasa amin'ny hafainganam-pandeha avo izy, ka nitarika ny oram-panala eo amin'ny ririnina akorandriaka sy ny mpikomy zombies.
Alahady SKI Alaska
Ski Safari flash hoavy
Toerana fanatanjahantena: Hero Slalom
123 Street Sesame: Lalao Winter an'ny Grover
Freeride. Fanamby fahaiza-manao
Toerana fanatanjahantena: Slalom Hero
Yogi Bear manao ski ambony rano traikefa nahafinaritra
Fanambarana Ski mainty sy fotsy
Lalao Winter Grover
Mitaingina ny majia
Penguiana Jones sy ny Snowball of Doom
Lalao Tia manao ski ambony tamin'ny Category:
Farany tia manao ski ambony lalao
Lalao Online Rehetra tia manao ski ambony lalao
Avy prehistoric fotoana ho amin'ny lalao maoderina tia manao ski ambony
Na dia tsy mbola skied, dia ho azy ireo ny mahazo ny raha vao mianatra ny fitsipiky ny fanaraha-maso raha sliding. Azo hazavaina amin'ny alalan'ny fototarazo fahatsiarovana, satria razantsika, izay nipetraka tany Skandinavia sy ao amin'ny faritanin'i Rosia ankehitriny mihoatra ny 2000 taona BC. f. lasa izay, efa nampiasa azy ireo hifindra eo amin'ny fihazana.
Toy ny sary porofo hita teo amoron'ny Zalavruga any Rosia, izay aseho an-tsary ny sehatra Ski nihaza. Ao amin'ny faritra Pskov archeologists dia tsara vintana nahita ny Ski avy elm. Ny fanadihadiana no nametraka daty – 2620 – 2160 talohan'i JK.
Tsy mahagaga fa ny olona any amin'ny faritra avaratra nitranga mba ho fitaovana izay manampy handresy teny an-dalana ho any amin'ny avo rakotra oram-panala. Snowshoes ireo ihany koa ny nanangana ny foko ireo faritra, fa amin'ny fivoaran'ny olona nahita fa lavitra Tsidika mampahazo aina kokoa teo an-fisaka ambonin'ny hazo, ka nahatonga azy io ho solafaka.
Tamin'ny voalohany dia malalaka ski sy fohy, ary ankehitriny izy ireo dia ampiasain'ny mpihaza ny mpanarato. Fa tsikelikely dia nanjary elongated kokoa sy tery, ary ny hazo dia nosoloina plastika voalohany, dia ireo zavatra mifangaroharo ny fitaovana isan-karazany, ka mahatonga azy mafy maivana sy matanjaka kokoa. Snow tapa-kazo ho amin'ny ski tsy toy izany, sy ny fampiasana amin'ny ankapobeny menaka manokana manilika mety toy izany.
Modern tia manao ski ambony azo zaraina ho:
adrenaline-fanatanjahan-tena maimaim-poana lalao tia manao ski ambony
Virtual zava-misy mifamatotra akaiky amin'ny lalao vokatra sy ny asa toy ny simulators, sy ny tselatra kilalao, izay azo nampihatra na dia amin'ny fanatanjahan-tena. Tia manao ski ambony Games – anisan'ny famoriam-bola. Players Asaina mba handeha an-tendrombohitra lalana, izay ny dingana toa ka tena tsy hita fa ny hany singa dia azo tsapain-tanana ny tsy fisian'ny fihetseham.
ny taranak'i-kafanam-po koa ny mankatò Ski tehezan-tendrombohitra miaraka amin'ny Yeti, Dasha, Hello Kitty, Barbie, Mr Bean, mikarakara ny fifaninanana eo Sonic sy Super Mario. Na Dadabe Noely dia afaka mahatsapa ny tena tafahoatra, raha manangona fanomezam-pahasoavana amin'ny hafainganam-pandeha, ka mety tsy hahazo ny foto-kazo ny ririnina. Tafintohina amin'ny sakana, dia solafaka teo lohany alehany rehetra, very ski.
Ao amin'ny lalao an-tserasera ski milalao mahafinaritra, satria ririnina foana sambatra indrindra amin'ny fahazazany. Dia tsy ilaina mba ho lasa mpanao fanatanjahan-tena mba handray anjara amin'ny biathlon, rehefa mandeha ny mpanao ski lavitra sy nitifitra amin'ny lasibatra. Amin'izao lalao, ny rehetra dia afaka hanorina firaketana an-tsoratra, ka namela mpifaninana aoriana.
Tamin'ny vanin-taona mafana, koa, tsy misy antony tokony hiala tia manao ski ambony – tsambokely nidobodoboka be ny rano, ary ny skier mitandrina azy mifatotra ho any amin'ny tady sy mahazo onja. Ny ankizivavy Ho faly ny hilalao ny lalao maimaim-poana ski, mifidy akanjo tsara tarehy Barbie, Dora sy ny maherifo, izay no hiseho ao anaty rano-tia manao ski ambony eo amin'ny fonon'ilay gazety. Dia hahita, ary tia ny mpivady izay nanoroka mandra-namana be atao ny raharaha. Fa raha izy ireo hanatona ny maso anao, ianao hijanona nandritra ny fotoana fohy, ka ianao no isa hevitra.
A Ski tantara kely
Vitsy ny olona mahalala, fa nandritra ny ady amin'ny eras samihafa anisan'izany ny ankehitriny sy tia manao ski ambony fitaovana. Mazava ho azy, efa nampiasaina, izay nisy foana ny ririnina lava, fanala, ny oram-panala. Ny porofo voalohany hitranga tamin'ny 1200, raha ny Anarana Mpanjaka Sverker baiko ny miaramilany mba hanatanteraka ny Reconnaissance asa amin'ny ski. Ankoatra izany, dia misy matetika ny momba izany fitaovana isan-karazany nandritra ny ady, mandra-pahatongan'ny Ady Lehibe Faharoa. Ary ny sary hoso-doko sy soratra voasokitra hita ski miaramila Norvezy (birkebeynery), Alemaina, Isiraely, ary, mazava ho azy, Rosia.